AbakwaNokia Advertising ... Windows Phone Next | Martech Zone
AbakwaNokia Advertising… Windows Phone Next
NgoMsombuluko, Okthoba 31, 2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Zombili iNokia neMicrosoft zilahlekelwe umfutho emakethe yase-United States, imakethe ephethwe yi-iPhone ne-Android. Abantu akufanele babala noma iyiphi inhlangano okwamanje. Okokuqala, INokia iyabusa imakethe yamazwe omhlaba (40%) enamasheya asindayo kakhulu eYurophu nase-Asia. AbakwaNokia abenzi kahle kuphela, abasebenzisi babo banamathuba amaningi okuchofoza ekukhangiseni okukhokhelwayo.
Ukusuka Akusebenzi i-infographic: IGerman ibona isilinganiso sokugcwalisa esingu-98.9% kuNokia, ngaphezu kuka-2% CTR nangaphezulu kwe- $ 2.5 eCPM. Lezo izinombolo abathuthukisi be-Apple abangaphupha ngazo kuphela.
Kuleli sonto, abakwaNokia bakhiphe izingcingo zabo ezintsha ze- I-Windows Phone. Lokhu kungahle kungabonakali kuyinto enkulu uze uhlanganise izinto ezimbalwa ndawonye… iNokia, I-Windows Phone, Futhi IMicrosoft XBox 360. Amafoni anamandla amakhulu futhi aklanywe kahle. I-XBox 360 inesabelo esikhulu semakethe embonini yokudlala. Futhi iWindows isanesabelo semakethe esimangalisayo ku-Enterprise. Lezi zimakethe ezintathu ezihlukile futhi ezinenzuzo enkulu.
Njengoba imakethe yebhizinisi yamukela iWindows Phone kanye nabakwaNokia abaphakela ngehadiwe edingekayo… sizobona izinguquko ezithile ezimangazayo emakethe. Okunye ukuthinta okuhle ... lawa mafoni athunyelwa nge-Nokia's auto navigation, isevisi yomculo (izingoma ezingaphezu kwezigidi eziyi-14 kuze kube manje), i-Facebook, i-Twitter, i-LinkedIn integrated kanye I-SkyDrive… Isixazululo sokugcina amafu seMicrosoft.